Boky 6 vakiana amin'ny teny anglisy, mora sy tonga lafatra hanombohana | Ireo mpamaky rehetra
Villamandos | | boky
Mihabetsaka ny olona no manapa-kevitra ny hanomboka hamaky amin'ny teny Anglisy noho ny antony samihafa, izay ahafahanay mampiditra fanamafisana, antony matihanina na noho ny tsy misy fandikan-teny azo vakiana fotsiny. Androany ho an'ireo rehetra izay mamaky amin'ny teny anglisy dia manolotra anao 6 izahay boky hanombohana mamaky amin'ny teny anglisy, na dia alohan'ny hanombohana ity lisitry ny boky ity aza dia tianay ny hampazava tsara fa tsy boky ho an'ny vao manomboka na olona tsy manana fahalalana taloha izy ireo.
Raha fintinina, raha handeha hanomboka amin'ny traikefa nahafaky ny famakiana ireo 6 ianao boky hovakina amin'ny anglisy Manoro hevitra anao izahay anio, tsy maintsy namaky boky fototra bebe kokoa ianao, ary ireo boky izay hasehonay anao anio dia tsy tena fototr'izany na ho an'ireo izay vao nanomboka tamin'ny teny Anglisy.
1 Ilay lehilahy taloha sy ny ranomasina avy amin'i Ernest Hemingway
2 Tompon'ny lalitra nataon'i William Golding
3 Famonoana olona indroa nataon'i Anna Lopez
4 1984 nataon'i George Orwell
5 Frankenstein avy amin'i Mary Shelley
6 Ary avy eo dia tsy nisy na iray aza avy amin'i Agatha Christie
Ilay lehilahy taloha sy ny ranomasina avy amin'i Ernest Hemingway
El Ny sangan'asa noforonin'i Ernest Hemingway farany izy angamba no novelabelariny malaza indrindra ary iray izay nahavita nitana ny laharana tamin'ireo boky be mpamaky indrindra teo amin'ny tantara. Ao anatin'izany, ny mpanjono iray ao Santiago izay monina any Havana, izay tsy azony trandrahana na inona na inona, dia nahita andro iray gaga tamin'ny trondro nanaikitra ny farango, niditra tao aminy tantara iray izay tsy tokony halainao, amin'ny teny anglisy na amin'ny fiteny hafa.
Tompon'ny lalitra nataon'i William Golding
Tompon'ny lalitra o Tompon'ny lalitra Ity no tantara voalohany sy malaza indrindra nataon'i William Golding izay navoaka tamin'ny 1954. Na dia kilalao literatiora anglisy aza izy io dia tsy dia fantatra loatra any amin'ny firenen-kafa, saingy nanapa-kevitra izahay ny hanome azy ity satria tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha izany.
ihany koa Boky iray izay mazàna vakiana amin'ny sekoly na institiota rehetra any Angletera, noho izany dia afaka manompo antsika rehetra izay te hamaky amin'ny teny Anglisy ihany koa mba hankafizany, hampihatra ary hianarana.
Famonoana olona indroa nataon'i Anna Lopez
Ny famonoana olona roa ao amin'ilay boky iray dia mety ho fitambarana tsara izay mitazona antsika hikatona amin'ilay boky mandritra ny ora maro ary izany no antony tsy ahafahanay tsy mitsahatra ny manoro hevitra anao hamaky Famonoana olona roa nataon'i Anna Lopez. Izy io koa dia boky tena atolotra ho an'izay rehetra manatrika ny famakiana amin'ny teny Anglisy.
1984 nataon'i George Orwell
1984 of George Orwell Izy io dia iray amin'ireo tantara foronina malaza indrindra amin'ny tantara ary koa iray amin'ireo novakiana sy nadika be indrindra. Navoaka tamin'ny 1949 dia a Tantara tantara an-tsary dystopian fiction, izay nahafahanay namaky tamin'ny voalohany ny teny sasany momba ny toerana rehetra.
Ny famakiana an'ity tantara ity amin'ny teny Anglisy dia manome tombony lehibe antsika, ary na dia eo aza ny zava-misy fa tena feno fandinihana sy marina ireo fandikan-teny ireo, amin'ny andalan-tsoratra maro amin'ilay tantara dia zavatra very ny fotokevitra tian'i Orwell ho tantaraina.
Frankenstein avy amin'i Mary Shelley
Frankenstein na Prometheus maoderina Izy io dia tantara iray izay nanapa-kevitra ny hamolavola ny lovantsofina amin'ny tantara Gothic. Azo antoka fa tsy misy mila antsika hiresaka na hitantara amin'izy ireo momba an'io tantara io, fa raha sendra nifoha tamin'ny torimaso lalina ianao dia afaka milaza aminao fa amin'ity tantara ity dia manandrana mifanohitra amin'Andriamanitra ilay mahery fo.
Ho an'ny maro, ity tantara nosoratan'i Mary Shelley ity dia heverina ho toy ny iray amin'ireo tantara voalohany amin'ny karazana literatiora foronina amin'ny siansa.
Ary avy eo dia tsy nisy na iray aza avy amin'i Agatha Christie
Agatha Christie dia iray amin'ireo lehibe amin'ny literatiora eran'izao tontolo izao ary koa iray amin'ireo mpanentana lehibe amin'ny literatiora britanika, ka tsy azony hadino ny iray amin'ireo bokiny tamin'ity fifantenana ity. Tsy nisafidy izay forona fantany rehetra izahay, ary nanapa-kevitra ny hifidy Ary dia tsy nisy, izay, na dia tsy dia fantatra loatra aza, dia hampiala voly antsika ary hahatonga antsika hahafaly ny tenantsika mandritra ny andro vitsivitsy.
Fantatrao bebe kokoa boky hovakina amin'ny anglisy? Avelao izahay ny soso-kevitrao satria famakiana enina fotsiny no noresahinay, saingy misy maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » General » boky » Boky vakiana amin'ny teny anglisy
Hanampy ihany koa aho
Ilay Prince faly sy ny tantara hafa nataon'i Oscar Wilde
Ilay Magicien Oz mahafinaritra avy amin'i Baum
Peter Pan avy any Barrie.
Mora ny mamaky, ary satria fantatsika ny tantara dia mora kokoa ny mahatakatra ny zava-mitranga